Taiwan : Ireo Mpamboly Ara-biolojika Ao Taiwan · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Mélanie Perroud
Voadika ny 07 Oktobra 2018 14:05 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, 日本語, Ελληνικά, English
Ao Taiwan, mihamarobe ireo tantsaha no mandeha amina fambolena ara-biolojika, na mamboly vary izy ireo na legioma, voankazo na raozy, ny dité na ny kafé. Mampiasa blaogy ireo tantsaha ireo mba hifanampiany na hivarotany ny vokatr'izy ireo.
Ny teny hoe “bio”, tsy teny misidintsidina araka ny maha-mora azy. Mitantara ny tantaran'ireo raoziny novolena ara-biolojika ny mpikarakara zaridaina iray [amin'ny teny sinoa na teny anglisy avokoa ireo rohy rehetra]:
Voalohany, avela ho lavavolo mandritra ny telo taona mahery aloha ny tany ; rehefa hamboly an'ireo raozy, tsy mampiasa fanafody famonoana bibikely na zezika simika ; omena tsiro ireo tany mba hamokatra an'ireo singa ara-boajanahary… tsy maintsy mampangotraka rano misy sakay ary ampiasaina io mba hampandosirana an'ireo “mpitsidika” (ireo hala sy bibin-tsaonjo)… Koa satria tsy mampiasa vokatra ara-tsimika hanalàna ahitra, tsy maintsy tapahina amin'ny alalan'ny antsim-bilona (antsy bila), tsirairay, ireo ahidratsy. Mila asa sy fotoana ny toerana iray malalaka hambolena raozy.
Ary raha toa ahenan'ny mpanao zaridaina ireo ezaka ataony:
Hiha-marobe ireo bibikely katsentsitra, bibin-tsaonjo, hala, sy ny sisa izay hihinana ampifaliana an'ireo raozy. Handifotra ny toeram-pambolena ireo ahidratsy ary ho toeran'ireo bobongolo vovobovoka sy melanozy ‘mélanose’ tsy azo ihodivirana ireo ravin-draozy.
sary an'ny justeating
Misy koa ireo fomba hafa mikasika ny fambolena. Sahala amin'ny fambolem-bary miaraka amin'ireo ganagana? Manazava toy izao ny iray amin'ireo mpandàla an'io fomba io:
Voafetra ny habetsaky ny asa iasan'ny ganagana iray. Amina tanim-pambolena mirefy 0,1 hektara, tsy maintsy misy ganagana roapolo mba ho afaka tsara ireo ahidratsy sy ireo bibikely. Fito andro aorian'ny fanetsana, mividy zanaka ganagana any amin'ny faritr'i Yilan izahay. Folo andro aty aoriana, alefanay eny an-tanimbary izy ireo ary avelanay hizatra ny tontolo iainanana. Rehefa “miasa” ireo ganagana, miankina amin'ny fahazarany ny fandaharam-potoanan'izy ireo: mandeha izy ireo ary mihinana any anaty tanimbary any mandritra ny andro ary mody rehefa mirotsaka ny alina. Valopolo andro eo ho eo aorian'ny fanetsana, amin'ny fotoana izay hanirian'ny vary, alefanay ao anaty dobo izay hanalehibeazanay azy ireo ganagana. Terena hiala sasatra izy ireo ary tsy miasa eny an-tanimbary intsony.
Na dia tsy mifandanja amin'ny ezak'ireo mpamboly aza ireo valisoa ara-pitaovana, miezaka ny manambony saina izy ireo. Miresaka sifotra ao amin'ny toeram-pamboleny i Green-Mam:
越乾淨的土地 , 就有越多的蝸牛 ~說到蝸牛 ~ 真的讓人恨的牙癢癢 , 前一天才種下的菜苗 , 隔天早上通通不見蹤影 …媽媽拿著手電筒道菜園查看 ~終於找到兇手 ~ 就是他 …..蝸牛
記得 ~ 以前只要下雨天 , 姐弟就會拿著籃子撿蝸牛去 ~ 回來一陣敲敲打打 ~ 再用木頭灰燼又搓又洗 ~ 晚餐就有炒蝸牛可吃。現在要吃炒野生蝸牛少之又少 , 如果有也貴的嚇人。乾脆通通抓起來 , 養他一陣子就有炒蝸牛可以吃。嗯 ! 這主意好像還不錯 ~
Arakaraka ny mampanankarena ny tany, no maha betsaka an'ireo sifotra. Raha resaka sifotra, tena tsy misy itiavana azy ireo. Izay voly novelana androany dia tsy hita intsony ny ampitso… Amin'ny alalan'ny fitiliana ny toeram-pambolena rehefa alina miaraka amin'ny jiro fitsilovana, hitan'i Neny ireo mpandripaka: io, ilay sifotra.
Tadidiko, taona vitsivitsy lasa izay, nitondra harona teny an-tanimboly izaho sy ny anadahiko mba hanangona an'ireo sifotra nandritra ny andro avy orana. Taorian'ny fanapotehana sy fanasàna azy ireo tamin'ireo lavenon-kazo, nendasina natao sakafo hariva ireo sifotra. Sarotra ny mahita an'ireo sifotra dia voaendy amin'izao androntsika izao. Ary raha mahita aza ianao, tena lafo be. Manolotra hevitra aho ny mba hiarovana an'ireo sifotra ireo sy hiompiana azy ireo mandritra ny andro vitsivitsy, ary avy eo afaka mihinana sifotra voaendy. Hmmm, toa tena hevitra tsara ny ahy.
Mitanisa miaraka amin'ny hanohany an'ireo totozy an-tsaha ao amin'ny saham-bomangany ny mpamboly iray hafa.
Matahotra izahay sao ho sahisahy ireo totozy ka hihinana an'ireo vomanga rehetra mialohan'ny fijinjana. Rehefa afaka hanasa an'ireo namanay ho ao an-tsaham-bomanga izahay, mampanantena anareo aho fa hilalao “fisamborana totozy” ary hanao fitsarana amin'ireo totozy matavy ireo.
Samy manana ny tantarany ny toeram-pambolena biolojika tsirairay avy. Tamin'ny taona 1999, nitrangana horohorontany mahatsiravina tao Taïwan, tamin'ny maridrefy 7,3 tamin'ny maridrefy Richter. Olona marobe tao ChungLiao, iray tamin'ireo faritra ravan'ny horohorontany, no niasa hahatonga ny vondrom-piarahamonin-dry zareo ho velona indray. Natsangan'izy ireo ihany koa ny “Befarmer” tamin'ny taona 2003, izay nitondra an'ireo voankazo avy amin'ny fambolena biolojika.
Tohin'iny horohorontany iny ihany, ny FriendshipCITW dia nanomboka asa iray miaraka amin'ireo mponina teratany tao amin'ny reniranon'i Taichung Daan (L’liung penux amin'ny teny atayale) hametrahana lakozia iray iaraha-miasa ary hivarotana ireo vokatra biolojika.
Marobe ireo mpamboly ara-biolojika ao Taïwan no manam-pahasahiranana amin'ny fivarotana ny vokatr'izy ireo. Ny sasany mikarakara tsena mba hiarahana mivarotra. Manomana fihaonana ihany koa izy ireo mba hiarahana mianatra. Ny Hopemarket no iray amin'ireo fikambanana izay mampifandray manokana an'ireo mpamboly sy ireo mpanjifa. Manamarika ny youngsing hoe:
Miantso anay tsy tapaka mba hanmporisika anay ireo mpanjifa izay hitanay tamin'ny alalan'ny Hopemarket… Manantena aho fa tsy hijanona fotsiny amin'ny fividianana sy fivarotana ny fiarahamiasa misy eo aminay sy ireo mpanjifa. Manantena aho fa ho afaka hihinana ampitandremana ny sakafo izay karakarainay ireo mpanjifa. Ary koa, manantena aho fa ho afaka hizara miaraka amin'izy ireo ny fizotran'ny fikarakarana ary mba ho afaka hizara an'ireo fanehoankeviny aminay izy ireo. Io indrindra no tena irianay.
Rehefa misafidy ny fomba famboleny ara-biolojika izy ireo, ireo mpamboly sasantsasany mifototra amin'ny fitehirizana an'ireo karazany avy ao anatiny sy ny famoronana fanampinkarena (valeur ajoutée) manodidina an'ireo karazana ireo. Ohatra, ny goavy ao Taïwan, izay tena manan-karena hanitra nefa dia kely dia kely sady tsy ampy fahamamiana ho an'ireo mpanjifa ankehitriny. Na dia tsy dia mahomby eo amin'ny tsenan'ireo voankazo vaovao aza ny goavy, dia nahitàna, miaraka amina saina mahay mamorona kely fotsiny, anjara toerana mahafinaritra ho azy mba ho tsindrin-tsakafo.
Indraindray, tsy maintsy mila bebe kokoa noho ny fananana saina mahay mamorona mba hampitsiriana ireo karazana avy eo an-toerana ireo: traikefa. Ohatra, manazava ny mpamboly iray fa ny fahitana an'ireo tsimoka volobe (bambou) amin'ny ririnina ao anatin'ireo tendrombohitra dia tena sarotra noho ny mahita an'ireo olatra ‘truffles’ fihinana ao Frantsa. Ny mahasamihafa azy, mampiasa kisoa ireo Frantsay mba hahitàna ireo olatra fihinana ireo, raha ireo mpamboly ao Taïwan kosa mahita an'ireo tsimoka volobe noho ny traikefany monja. Manoratra ny mpamboly za-draharaha iray manao hoe:
Tsy mora ho anà dondrona iray ny mahita tsimoka volobe… Tsy miara-mitsimoka ireo volobe Moso, goavana ny elanelana misy eo amin'izy ireo. Tsy ara-dalàna ny fakan'ireo ‘rhizomes’. Indraindray mipoitra amina toerana tena lavitra ny reniny ireo tsimoka. Raha tsy dia betsaka loatra ny orana amin'ny vanim-potoana iray, tsy hahita tsimoka mihitsy manerana ny tendrombohitra.
Raha fintinina, ny fambolena ara-biolojika dia tsy manova fotsiny ny fomba fiasan'ireo mpamboly ; manova ny fomba izay fahitan-dry zareo ny asan'izy ireo ihany koa izy. Miverina amin'i sioong ny teny farany:
Mihevitra aho fa ny asana mpamboly dia ny fampitsimohana vary fotsiny ihany. Ankehitriny, fantatro fa ny fontsika no novolentsika saingy tsy tao an-tsaintsika loatra. Isika no ireo izay mahalala kokoa ny tany, satria ny elanelana misy eo amin'ny fontsika sy izy no fohy indrindra.
27 Mey 2021Azia Atsinanana
24 Marsa 2021Azia Atsinanana